Njengoba kunjalo kubo bonke edolobheni elikhulu, Voronezh nyangazonke ukuvula zokudlela ezintsha, okusheshayo Izitolo ukudla, izinkantolo ukudla, ikhofi kanye khekhe.
Sitolo sekudla lokuphekiwe Voronezh ezahlukene ku imenyu kanye lokubhalela. Kukhona nalezo ezivame engenanto, nezikhuni yibo njalo egcwele izivakashi. Namuhla sizoxoxa omunye zokudlela best edolobheni - "Yoko-Mocha".
Phakathi izikhungo eziningi Culinary Voronezh ivelele inethiwekhi zokudla okusheshayo Yoko Mokko. Izikhungo kwalesi inethiwekhi kuhlale aminyene ethokomele. Kungokuphawulekayo ukuthi incwadi izakhamuzi Voronezh uthando kule ndawo.
"Mocha-Yoko" (Voronezh) iziveza njengencwadi inethiwekhi nge okuxubile yeningi zokudlela ekhishini - Japanese-Italian. Inethiwekhi luhlobo kuqala wavula ngo-2011 maphakathi Voronezh. Izivakashi ngokushesha wathandana yokudlela engajwayelekile, amanani ezifanele kanye kulungiselelwa stylish ngaphakathi sikhungo.
Manje vula zokudlela eziningana chain, futhi lokhu kuyinto inkomba ukuthi athandwa kakhulu phakathi labantu Voronezh.
Ngo "Yoko-Mocha" (Voronezh) usebenza ukuhlinzekwa kwezidingo, oyoletha oda kumaminithi kuphi emzini. It kuvela ukuthi ngempela!
Pizza recipe siqu
Imenyu Yoko Mokko (Voronezh) uvelele impela ebanzi: kusukela ukudla Japanese hit (sushi ahlukahlukene kanye roll-amasethi) kubaholi undoubted we-Italian (tinhlobo letehlukene pizza, pasta kanye nezinye izitsha hot, appetizers kanye nama-dessert). Ngokuvamile, lapha wonke umuntu angathola Akeve efuna ukwenza lokho zama, ngawo lowo mzuzwana!
kungenziwa yayala kusuka iziphuzo Yoko Mokko (Voronezh), kotshwala bezinhlobo zonke kusukela ubhiya newayini ukuze zilwane eziqinile, kanye neziphuzo ezibandayo.
Ekhishini kuleli "Yoko-Mocha" izitayela fashion wemfanelo futhi akuthandayo of the isikhathi abantu abaningi.
Ungazama zonke zakudala izinhlobo pizza ezifana pepperoni, Diablo, kaprichiozo, Veneto, modeno, Castile ne t. D. Ungaphinde wakhe pizza yakho siqu kusuka izithako zakho ozithandayo. la izitsha Inani lisukela ruble 300 kuya 780 (kuye ngokuthi imiphi imikhiqizo ayingxenye pizza).
Yini i-pasta yakho ozithandayo?
Futhi Yoko Mokko yokudlela linikeza ezahlukene izinhlobo pasta: kusukela zakudala (marinara, Bolognese, carbonara, konporchino, kalermo) ukuze elula owaziwa opheka ngamunye pasta nge cutlet kanye / noma inkukhu.
Izindleko nokunamathisela ngamunye akuyona ruble ezingaphezu kuka-400, kwaba nabantu bezizwe ezixubile ukudla ngakunye ukuze ngifuna ukuzama njengamanje. Ngokwesibonelo, i-pasta carbonara - a Pancetta, ukhilimu, ushizi granopodano amalikhi nesweli. Futhi konke ngoba ruble 360.
Tacos noma burritos?
Ungadla ashisayo Yoko Mokko has a burrito, quesadilla, tacos - hits esisemqoka cuisine Spanish Mexican, kanye Ungadla kusukela ukupheka European nase-Asia.
Naphezu kweqiniso lokuthi yokudlela ekuqaleni okuphakanyiswe imenyu Japanese-Italian, ngokushesha yaba inqubomgomo isikhungo wukuthi abaningi izitsha European ivele imenyu, futhi manje kukhona ngisho Mexican. Futhi lokho okukhulu, ngoba uma uthanda sushi, futhi umngane wakho akakwazi ucabange ukuphila kwami konke ngaphandle tacos, awudingi ukuba bayekethise - nje sibheke Yoko Mokko nokuhleleka zonke izitsha zakho ozithandayo.
Yoko Mokko kungaba adle kahle, ngoba Ukukhetha isobho futhi ezihlukahlukene ezahlukene.
Kufeza hodgepodge kanye hodgepodge, ushizi kanye mushroom isobho, futhi isobho Asian futhi cuisine Mexican. Izindleko izitsha ketshezi liphakathi esifundeni ruble 150, ukuze sikwazi ukuthatha futhi namanje kushisa. Ngokwesibonelo, iyiphi inyama noma inyama yenkukhu izitsha: yenkomo stroganoff, yenkomo Steak, turkey, ingulube in uju-lwesinaphi usoso, ingulube loin, ingulube eyosiwe, pan ne inyama yengulube, krasnoglazka kubhakwa, Yasai Ya empumelelweni bese uhlala Tepa nabanye. Njengoba ubona, lapha side by side nge edumile cuisine Asian Cuisine European, kodwa akuvimbeli kubo bonke ukuba high kanye okumnandi. Amanani for izitsha ashisayo musa idlule ruble 370.
Ukuze Hlobisa ungakwazi oda imifino eyosiwe noma amazambane okulungiselelwe nganoma iyiphi indlela.
Jikela cuisine Japanese
cuisine Japanese e yokudlela Yoko Mokko imelelwa izinhlobo ezahlukene sushi: ze-Tempura maguro, tempura ebi, Syake tempura, tempura tacos, maguro, murazaki nezinye ngokulinganayo odumile.
ebi ukwatapheya, ebi, unagi Tories nabanye: it is zihambisana zasolwandle Ungadla - Spice futhi wakhonza lapha. Ngokuvamile zihambisana zasolwandle tuna fish, ukwatapheya, izimfanzi, nokudla kwasolwandle ezifana izimbaza, ingwane nezinye.
Lesi isibonelo esihle ukudla Japanese - isidlo gunkan. It is zihambisana obomvu alga umdlalo izithako ezahlukene.
Zonke sushi Gunkan Spicy futhi ithengiswe ngamunye, intengo esifundeni ruble 60-79.
Worth ke ukuzama isidlo okuthiwa hosomaki - kuyinto efana roll sushi ne bathanda izinto ezingefani, ezifana maki unagi nge umbokwane, Syake maki ne-salmon, ikhukhamba maki cap nabanye. amasethi elincane appetizers abiza engama-ruble angu-90.
Njengoba Japanese ekhishini imiqulu ukwenza ngaphandle?
Yoko Mokko imenyu kuhlanganisa ezihlukahlukene imiqulu, imiqulu kanye ngisho amasethi imiqulu efudumele, futhi yonke ukunambitheka kanye nesabelomali.
Lapha ungakwazi nambitha imiqulu edumile emhlabeni wonke "New York" futhi "Philadelphia." Futhi Rolls "Canada", "Philadelphia-ukukhanya", "Geisha," "Idaho" nabanye. Zenziwa kusukela esezingeni izithako futhi luhambisane kahle original zokupheka.
Ngokwesibonelo, roll "California" senziwa salmon, ikhukhamba, ukwatapheya caviar tobiko. Eight emiqingweni isethi abiza ruble 270 kuphela.
Uyini imiqulu elifudumele elisuka Yoko Mokko imenyu? Lawa imiqulu efanayo kodwa izithako ashisayo. Ngokwesibonelo, roll negama Italian "Bonito" zihlanganisa Omelette, umbokwane, ubhekeni, noshizi. Kubalandeli of flavour yokuqala nje isipho ukudalelwa.
Noma lapha - roll emangalisayo "Bir-roll" (Beer-roll). It ibhalwe nge ubhekeni, inkukhu eyosiwe ushizi kanye sauce ashisayo. imiqulu Warm ukuthengiswa intengo ruble 290.
Imisa imiqulu baphume ziphindeke (kufika ku-ruble ayizigidi eyodwa). ikhithi ngasinye sibandakanya ezihlukahlukene ethandwa kakhulu futhi kuhlanganiswe nomunye imiqulu kanye nezinye Ungadla encane Japanese.
Kusho ukuthini kophudingi ingajatshulelwa at Yoko Mokko?
Usebenzela tinhlobo letehlukene amakhekhe, ehla futhi pancake, kukhona ukusika izithelo fresh. Amakhekhe Famous "Snickers", "ePrague" noma nehlelo elithile khekhe elimnandi, ungazama.
Njengoba ubona, imenyu yokudlela sika Liyindawo ahlukahlukene, eyenzelwe konke akuthandayo.
Kodwa akunakwenzeka ukuhlola Voronezh zokudla, bengazi ukuthi angiphendule le amakhasimende.
Kanjani ukukhuluma kungase ka "Yoko-Mocha" (Voronezh) Izivakashi lokhu isikhungo?
Le restaurant has amakhasimende amaningi aqotho, futhi ngokuvamile bathi ngempela like it. Zonke, ngaphandle kokukhetha, zithi sevisi imenyu ezinhle futhi ezihlukahlukene. Phakathi amaphutha wawuthi izithombe kwimenyu kabanjalo ukudla kwangempela, kanye neqiniso lokuthi izitsha ukushintsha njalo ku imenyu.
Thanda yokuthi kukhona nekuchaza izitsha phezu imenyu, okuyinto njalo ikuvumela ukuthi uyafuna nale oda noma cha. Plus futhi itholakala lokuthi ukuthi kukhona ukubhema ehlukile futhi non-ukubhema. Amanani e yokudlela abasakwazi ngokusesilinganisweni, futhi amaphuzu ovamile kule ndawo ruble 500 ongu-1.
imicabango yabantu abaningi Izibuyekezo intanethi lungatholakala ukuthi "Yoko-Mocha" (Voronezh) - nendawo enkulu ukuze yokuzijabulisa nabangani. Kuyinto esihlwabusayo kakhulu futhi ethokomele, amanani ezingabizi, nebubi, ngokusho kwabanye amakhasimende kanye neze.
Izivakashi ngempela ukuthi izingxenye zinkulu futhi isevisi okuhamba phambili. Isibhakabhaka ezolile kakhulu, opholile ingaphakathi - a umculo zikanokusho - hhayi elikhulu, elenza kukwazeke ukuxoxa nabangani bakho noma lover.
Kanti futhi wabhekisela izaphulelo for abafundi, okwenza "Yoko-Mocha" yindawo ngisho nangokwengeziwe.
pasta simnandi kakhulu
isikhungo amakhasimende bancome yokudlela njengendawo yeningi kanye nokudla okumnandi, lapho ukhonza zikanokusho pasta marinara - imicabango yabantu abanjalo bangabaphostoli Izibuyekezo eziningi online. ukukhuphula kanye izaphulelo avamise ukubizwa, okuyizinto isikhungo. Oweta banobungane, ngakho uthanda ukushiya ithiphu.
Ngezinye izikhathi kuthiwa ukuthi zonke zokudla kunethiwekhi ingaphakathi ezahlukene, kodwa lesi sici kakhulu kwawo. Njengoba isikhathi ngasinye kwafika esikhungweni ajwayelekile ezindaweni ezahlukene, uzithola efana zokudlela ezahlukene futhi ikakhulu thokozani ukuthi wayesevile eminyakeni engu-intandokazi yakhe "Yoko-Mocha". Kulaba minuses, abanye zilandise njengesibonelo yokuthi izitsha angekho imenyu, okuyinto bavame ukungamukelwa ithathelwe indawo izikhundla ezintsha efanayo.
Ngezansi, isibonelo, sikunikeza isithombe omunye pizza Bakhonza kulezi zokudla:
Ungase futhi uthole imibono ukuthi isikhungo ishintshile. Kukhona oweta ubani iphutha izitsha, kodwa lokho izindleko nalokho okubizwa ngokuthi isici womuntu.
Isikhungo pizza esihlwabusayo kakhulu - ngakho uthi izivakashi eziningi yokudlela. Pizza lapha kubizwa ngokuthi omunye the best in the city. Futhi izivakashi abathanda iqiniso lokuthi kwenethiwekhi simiso Isaphulelo amakhadi, futhi lena inenzuzo amakhasimende avamile.
"Taj Mahal", yokudlela (eMoscow): izithombe kanye nokubuyekeza
Indlela ukukhetha e Rostov-on-Don Indawo yokudlela
Yini benze iplamu: engaqinile noma uvikelekile kwesitulo?
Medblue Gennadi 4 *: ukubuyekezwa. Amaholide eGreece
"Izinkanyezi esibhakabhakeni akwanele": ukubaluleka phraseologism nencazelo yalo jikelele